Isitudiyo sohlelo oluvulekile esizimele, esizimele & esinethezekile e-Whanarua Bay. I-ARUHE iphakathi kwezihlahla zomdabu zase-NZ, futhi inombono we-Pacific Ocean. I-ArRUHE inikeza umuzwa ophelele wokubaleka. noma ukuma phakathi kwe-Opotiki ne-Gisborne. I-State Highway 35 yinhle ngendlela emangalisayo futhi ayivamisile ukuvakashelwa izivakashi.
Uma ubhukha, sicela uqaphele ukuthi intengo yabantu ababili eyababili abalala ngombhede. uma ungathanda umbhede ohlukile, ngicela ubhukhe oku-3
I-Whanarua Bay iyimizuzu engu-25 yokushayela usuka esitolo esiseduze futhi ngaphezu kwehora usuka esitolo esiseduze. Kufakwe ekuqashweni, nokuhlala kwesikhashana, ukukhethwa kwezinto zasekuseni kunikezwa ukuze uzilungiselele ngokuthanda kwakho. Ikhishi liphethe izithako eziyisisekelo futhi ikhishi lifakwe kahle. I-gas BBQ iyatholakala ukuze uyisebenzise. Izindawo zokudlela ezimbili, ngayinye ibheke kolunye uhlangothi, izothatha amaminithi angu-30 ukufinyelela ku-SH35. Kunombhede owodwa olingana nenkosi futhi inani eliyisisekelo elomuntu oyedwa noma ababili abalala umbhede owodwa. Umbhede kasofa ungenziwa njengombhede ophindwe kabili noma abantu abangabodwana ababili futhi kuyilapho lokhu kulungele ukuhlala isikhashana, akulungile kwabade.
I-Bay, ibanga lokuhamba imizuzu eyi-10, yinhle kakhulu ogwini futhi iphephile ukubhukuda, ukutshuza, ukudoba kanye ne-kayaking.
Ngaphansi komgwaqo, i-Pacific Macadamias isebenzisa ikhefi edayisa ikhofi elisha nezibiliboco ze-macadamia ehlobo. Amatheku nhlangothi zombili ze-Whanarua nawo afanele ukubhekwa njengesonto e-Raukokore.
Kuphinde kube nokuhamba ngezinyawo okungaqondile ehlathini ukuya empophomeni enhle kakhulu, futhi ebanda kakhulu. Kwabaqalayo kukhona ukuhamba ngezinyawo ukuya phezulu kwegquma ngemuva kwe-ARUHE okungaba nodaka futhi kushelele eBusika. Isibhakabhaka sasebusuku sase-ARUHE asinakho ukungcoliswa kokukhanya futhi ikakhulukazi eNkwindla nasebusika sicwebezela ngokumangalisayo futhi siyamangalisa ngokubuka izinkanyezi. Isimo sezulu lapha si-sub-tropical, ngakho-ke asikho isithwathwa eBusika.
Ngizobe ngisendaweni ukuze ngikwemukele futhi ngizotholakala ukuze ngikusize nganoma yiluphi ulwazi ongase uludinge. Ngiyajabula ukukuboleka noma yini yokuzijabulisa (inqobo nje uma nginayo vele:-) nanoma yini okungenzeka ukuthi usuyikhohliwe noma oyidingayo. Futhi ngihlala ngijabule ukwabelana ngengilazi yewayini, ikhofi, itiye kanye nengxoxo.
Ngizobe ngisendaweni ukuze ngikwemukele futhi ngizotholakala ukuze ngikusize nganoma yiluphi ulwazi ongase uludinge. Ngiyajabula ukukuboleka noma yini yokuzijabulisa (inqobo nje um…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$135.